१८ सी.डी. ४ को यात्रा - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / अन्तराष्ट्रिय / १८ सी.डी. ४ को यात्रा
By Digital Khabar on August 25, 2017
भाद्र ९, २०७४ – मलाई उडेरभन्दा गुडेर यात्रा गर्न खुबै मन पर्छ । विद्यार्थी छँदैदेखि म देश–देशावर घुम्ने कुरामा निकै सोख राख्थें । सन् १९७९ मा २६ वर्षे उमेरमा म नेपाल आएको थिएँ, भारत हुँदै गाडी यात्रामा । त्यस बेलाको काठमाडौंमा अर्कै सुन्दरता थियो । अझ पोखरा निकै चित्ताकर्षक लाग्थ्यो । त्यहाँ निकै कम घर थिए । फेवाताल धेरै खुला देखिन्थ्यो, अहिलेजस्तो मिचिएको थिएन । त्यही बेला साइकल भाडामा लिएर मैले काठमाडौं–भक्तपुर यात्रा गरेको थिएँ, अलौकिक ठाउँजस्तै अनुभव पनि ‘अलौकिक’ थियो ।
बच्चनले सम्झिए नेपाल
अब म अमेरिका बस्दिनँ….
Related Items18 CD 4AmbesdorBusinessdigital khabarDriveGermanyInternationalNationalNepalNewsPoliticsWorld
Next Story → नाडा अटो सो प्रारम्भ ( फोटो फिचर )